> Resource > Video > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Videos ka Motorola Droid Razr
Haddii aad akhriska qodobkan, waxaa loola jeedaa in aad raadinayso hab inuu ka soo kabsado tirtiray videos ka Motorola Razr Droid. Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) waa mid ka mid ah software ugu fiican inuu ka soo kabsado tirtirto xogta aad casriga ah, oo mid ka mid ah qaababka ay waa inuu ka soo kabsado delete videos.
Ka hor inta aanan bilaabin in aan ku sharaxay in aad sida loo isticmaalo Dr.Fone inuu ka soo kabsado aad tirtirto videos ka Droid Razr ah, waxaan u baahanahay in aan idinla socodsiiyo on qaar ka mid ah xaaladaha iyo tilmaamaha gaarka ah ee software-ka.
Marka hore, waa in aad joojiso isticmaalka aad Razr Droid sababtoo ah marka aad ka phone tirtirto sawir, sawirka aan gebi ahaanba laga badiyay. Waxaa weli waa meel ku xasuusta telefoonka, laakiin haddii xogta cusub yimaado oo meesha ku xasuusta meesha sawirka delete ahaa, ka dibna barta in, software ma awoodaa soo kabsaday aad sawiro tirtirto. Taasi waa sababta, waxaa lagu talinayaa in aadan isticmaalin smartphone barta in.
Marka labaad, Dr.Fone u android waa aalad awood iyo weli si sahlan ay u isticmaalaan. Waxaa ka shaqeeya oo keliya daaqadaha daqiiqad ah (ka XP daaqadaha si Windows 8). Shuruudaha ay ugu yaraan tahay 1GHz processor, 256 wan oo ah 1GB Hard Drive-. Doonistiisa Dr.Fone for Android ka shaqeeyaa inta badan qalabka android (smartphone, kiniin) sida Motorola Droid Razr, Samsung, HTC, Sony, iwm ...
Ugu dambeyntii, Dr.Fone u android bogsan karaan geelaa sida aan rujin Motorola Droid Razr.
Haddii aad rabtid in aad akhrido badan oo ku saabsan Dr.Fone u android, aad ay webpage booqan kartaa adigoo gujinaya link this: Dr.Fone for Android ama guji badhanka download hoos ku qoran si aad u bilaabin isticmaalka software ah.
Ka soo kabashada videos tirtiray ka Motorola Droid Razr waa iska sahlan. Connect aad casriga ah si ay u computer iyo bilowdo codsiga. Markaas, kaliya raacaan edbinta shaashadda oo sug Dr.Fone si aad u samaysaan sixir. Halkan waa faahfaahin dheeraad ah oo tallaabo-tallaabo edbinta.
Tallaabada 1. Isku aad Motorola Droid Razr si aad u computer
Talaabada 2. Diyaari in baarista Motorola Droid Razr
Halkaa marka ay marayso, Dr.Fone u android waxaa baar xusuusta oo dhan aad Motorola Droid Razr iyo kabsanaya ma aha oo kaliya xiriirada tirtirto, laakiin, waxa uu soo kabsaday xog kale oo ku saabsan casriga ah sida tusaale ahaan; aad sawiro, fariimaha, Cajalado, iwm ... Iyadoo ku xiran baaxadda xusuusta ee casriga ah, waxa laga yaabaa inay qaataan muddo ah. Sidaas iska baashaasho oo sug Dr.Fone u android inuu shuqulkiisii ​​qabsado.
Tallaabada 6. Kulanka Xiisaha Leh ceshan tirtiray videos
Haddii aad rabto in aad soo kabsadaan oo dhan ee aad videos, hubi in sanduuqa videos in Column ugu horeysay waxaa sax oo guji badhanka soo kabsado. Haddii aad rabto in aad ku eegaan aad videos dooro video gaar ah in aad rabto in aad soo kabsado, fadlan sax sanduuqa ku xiga video aad rabto in aad soo kabsado guji soo kabsado.
5 talooyin aad qabto in aad ka ogaato youtube 4k video